Siera Lion na Gini | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2014
IHE dị ka narị afọ ise gara aga, e nwere otu obere osisi apụ (nke a na-akpọkwa osisi akpụ) pulitere n’akụkụ Osimiri Siera Lion. Osisi a mechara too ma ghọọ nnukwu osisi. E si n’okpuru ya kpụrụ ndị ohu n’ahịrị na-agafe ruo narị afọ atọ. Ndị na-agba ahịa ohu bugara ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ma ụmụaka ruru ihe dị ka otu narị puku na puku iri ise n’ebe a na-ere ndị ohu ná mba ọzọ. Obi tara ndị ahụ na-agba ahịa ohu mmiri.
Osisi Apụ ahụ dị na Fritaụn
N’abalị iri na otu n’ọnwa Mach n’afọ 1792, ọtụtụ ndị ohu e si n’Amerịka bughachi Afrịka nọ n’okpuru Osisi Apụ ahụ mee ememme ha ji na-echeta otú ha si nwere onwe ha. N’ụbọchị ahụ, ha malitere ibi ebe a kpọrọ Fritaụn. Aha obodo a pụtara ndị nweere onwe ha. Ọ dabakwara adaba n’ihi na ndị ohu ahụ nọ na-atụ anya mgbe ha ga-enwere onwe ha. Ugbu a kwa, ha enwerela onwe ha. A nọkwa na-akpọta ndị bụ́bu ndị ohu n’obodo a ruo mgbe a bịara nwee ihe karịrị otu narị agbụrụ ndị Afrịka n’ebe ahụ. Ndị a bụ́bu ndị ohu kwekọrịtara na ha ewerela Osisi Apụ ahụ ka ihe gosiri na ha enwerela onwe ha, nakwa na ha enweela olileanya.
Kemgbe ihe dị ka otu narị afọ ugbu a, Ndịàmà Jehova nọ na Siera Lion na-akasi ndị mmadụ obi ma na-akọrọ ha gbasara “nnwere onwe dị ebube nke ụmụ Chineke.” Nnwere onwe a karịrị nke ahụ ndị bụ́bu ndị ohu nwere. (Rom 8: 21) Ọ bụ n’Alaeze Chineke ka ndị mmadụ ga-enwere onwe ha n’eziokwu. Alaeze ahụ chịwa ụwa, ụwa niile ga-aghọ Paradaịs, udo ga-adị ebe niile, mmehie na ọnwụ agaghịkwa adị.—Aịza. 9:6, 7; 11:6-9.
Kemgbe ihe karịrị iri afọ ise ugbu a, alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị na Siera Lion na-elekọta ozi ọma Ndịàmà Jehova nọ na Gini na-ekwusa. E nweela ọtụtụ nsogbu kpara ma ọchịchị obodo Gini ma akụnụba ya ma ndị mmadụ aka ọjọọ. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị obodo ahụ ji na-anabata ozi ọma Ndịàmà Jehova si na Baịbụl na-ekwusara ha. Ozi ọma a na-akasikwa ha obi.
E nwere ọtụtụ nsogbu n’obodo Siera Lion na Gini. E nwere ọtụtụ ndị ogbenye ọnụ ntụ, nwee ndị na-amaghị otú e si agụ na otú e si ede, nweekwa ndị bu omenala n’isi. E nwekwara ndị na-emekpọ ibe ha ọnụ. Ndị mmadụ ahụghịkwa ibe ha n’anya n’ihi na ha esighị n’otu agbụrụ. N’agbanyeghị nsogbu a niile, Ndịàmà Jehova nọ n’obodo abụọ a ka na-ekwusara ndị mmadụ ozi ọma. Akụkọ ndị anyị na-aga ịkọ banyere Ndịàmà Jehova nọ na Siera Lion na Gini gosiri na okwukwe ha ka bụ a kwaa akwụrụ, gosikwa na ha ka na-erubere Jehova isi n’agbanyeghị nsogbu ndị ahụ. Obi siri anyị ike na akụkọ a ga-eru gị n’obi ma mee ka okwukwe i nwere na Chineke sikwuo ike, n’ihi na Baibụl kwuru na Chineke bụ “onye na-enye olileanya.”—Rom 15:13.
Gụọ ihe gbasara ndị Siera Lion na ndị Gini. Gụọkwa gbasara okpukpe ha, na asụsụ ha.
N’afọ 1915, otu Onyeàmà Jehova bịara biri na Fritaụn. Ọ bụ ya bụ Onyeàmà Jehova mbụ bịara ebe ahụ. Ọtụtụ ndị chọrọ ịmụ Baịbụl.
Ndị ụkọchukwu kpara nkata ka ha mechie ndị Chineke ọnụ, ma Jehova ‘ji ọdachi nke ha laa ha n’iyi.’
Ọgbakọ Fritaụn malitere “ikwusasi okwu Chineke ike”
Zachaeus Martyn na-arị ugwu, na-arịda ugboro abụọ n’izu iji gaa ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova. Ọ na-aga kilomita asatọ n’ụkwụ. Olee ihe kara ya obi o ji kweta na ya amatala eziokwu dị na Baịbụl?
William R. Brown kwusara ozi ọma n’ọtụtụ ebe n’agwaetiti Karịbian nakwa n’obodo ndị dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Afrịka. Gụọ ka ị mata ihe mere o ji kwere na o nweghị ihe karịrị mmadụ iji ndụ ya jeere Jehova ozi.
A ga-aga ọtụtụ ebe zie ndị mmadụ ozi ọma. E zigara ndị ozi ala ọzọ ka ha gaa nyere ndị mmadụ aka ịmụta eziokwu dị na Baịbụl.
N’afọ 1956, ụmụnna nọ na Fritaụn dị na Siera Lion lere fim a na-akpọ The New World Society in Action. È nwere ndị ọzọ ga-ekwe ịbịa lee ya?
Ndị Siera Lion ma na ndị di na nwunye bụ́ Ndịàmà Jehova anaghị agba n’èzí.
Gịnị mere ndị òtù Poro so ná Ndị Omeiwu ji kwuo ka a machie Ndịàmà Jehova ịna-ekwusa ozi ọma?
Olee otú òtù nzuzo ndị dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Afrịka si emetụta ndụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nọ n’òtù ndị ahụ?
Ọgbakọ haziri klas a na-amụ otú e si agụ maka inyere ndị ọzọ aka ịmụtakwu Baịbụl. Ka ọtụtụ na-amụtakwu ka e si agụ, ọ bịara dị mkpa ka a sụgharịa akwụkwọ anyị n’asụsụ ha.
Olee otú ndị si mba ọzọ gaa mgbakọ na Gini si bata Gini n’ejighị akwụkwọ ikike?
Jay Campbell, onye ọrịa polio kpọnwụrụ ụkwụ, chọrọ ịga Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ. Ọ sịrị na ya ga-eji ihe ya ji aga ije gaa ọmụmụ ihe ahụ. Ọ̀ garuru agaru?
N’agbanyeghị na a na-alụ agha, Ndịàmà Jehova nọ na-enye ụmụnna ha na ndị ọzọ ihe e ji ebi ndụ, na-ejikwa Baịbụl akasi ha obi. Gịnị nyeere ha aka ịkata obi n’oge ahụ ihe siiri ha ike?
N’agbanyeghị agha a nọ na-alụ, Ndịàmà Jehova “nọ na-akụzi ihe n’akwụsịghị akwụsị, [na-ezisakwa] ozi ọma.”
Otu nwa okorobịa bụ́ onye agha nnupụisi chetara otú Ndịàmà Jehova si nabata ya nke ọma mgbe ọ gara ọmụmụ ihe ha. Gịnị mere o ji gbanwee ndụ ya?
N’afọ 1991, mgbe agha biiri ọkụ, ala ana-agba ghara ghara na Pendembu, ana-egbukwa ndị mmadụ n’ike n’ike, gịnị mere e gbughị Ndịàmà Jehova ụfọdụ?
N’oge a na-alụ agha, otu nwoke Onyeàmà Jehova na-esi Fritaụn ewega akwụkwọ ozi na Kọnakrị dị na Gini. Ọ na-esikwa na Kọnakrị buru akwụkwọ anyị lọta Fritaụn. Olee otú o si eme ya?
Tamba Josiah rụrụ ọrụ n’ebe a na-egwute dayamọnd tupu ya abụrụ Onyeàmà Jehova. Gịnị mere o ji chee na ya achọtala ihe ka dayamọnd mma?
Mgbe agha biri, a malitere ọtụtụ ọgbakọ ọhụrụ, na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’ebe dị iche iche, na-ezigakwa ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche n’ebe e nwere Ndịàmà Jehova ole na ole.
Obi siri Ndịàmà Jehova nọ na Siera Lion na Gini taa ike na ọtụtụ ndị obodo ha ka ga-abata n’ọgbakọ.
Philip Tengbeh na nwunye ya gbara ọsọ ndụ mgbe ndị agha nnupụisi batara n’obodo ha bụ́ Koindu. Ha nọ n’ogige ndị gbara ọsọ ndụ nyere ụmụnna ha aka ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ise.
Cindy McIntire bụ onye ozi ala ọzọ kemgbe afọ 1992 n’Afrịka. O kwuru ihe mere izi ozi ọma na Siera Lion ji atọ ya ụtọ karịchaa.